नयाँ पार्टीकाे रूपमा अगाडि बढ्दै “पच्चिस प्लस युवा समुह” - Asian Samachar
नयाँ पार्टीकाे रूपमा अगाडि बढ्दै “पच्चिस प्लस युवा समुह”
Asian Samachar सोमवार, पुस ११, २०७३ (11 months ago) अन्तर्वार्ता
यतिबेला मुलुकको राजनीति अत्यन्तै संवेदनशिल भईरहेको बेला राजनीतिक दलमा आवद्ध वा स्वतन्त्र दुवैै खालका युवाहरु आन्दोलित भईरहेका छन् । यतिमात्रै होईन नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरुको सरकार बनाउने र ढलाउने निरन्तरको खेलबाट आम युवाहरु आक्रोसित समेत देखिन्छन् । यसकै शिलशिलामा राजनीतिलाई नै अन्तिम उदेश्य बनाएर नेपालका २५ जना प्रवुद्ध ब्यक्तित्वहरुद्धारा “पच्चिस प्लस समुह” गठन भएको छ । उक्त समुहले आफ्नो स्थापना संगसंगै एउटा युवा समूह पनि गठन गरेको छ । जसमा २५ जना बिभिन्न क्षेत्रका युवाहरु आवद्ध छन् । प्रस्तुत छ पच्चिस प्लस युवा समुहका संयोजक शुरेश गिरिसंग एसियन समाचारका लागि नरेश न्यौपानेले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।
“पच्चिस प्लस युवा समुह” भनेको कस्तो संगठन हो ?
नेपालमा विभिन्न क्षेत्रको २५ जना बरिष्ठ ब्यक्तित्वहरुद्धारा गठित पच्चिस प्लस समुह छ । र यो एक सामाजिक संगठन हो । त्यहि पच्चिस प्लस समुहको भातृ संस्थाको रुपमा पच्चिस प्लस युवा समुह गठन भएको छ । यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सहि ट्रयाक्मा ल्याउन, मुलुकभित्र शुसान र जवाफदेहिता कार्यन्वयन गराउन, राष्ट्रिय अखण्डता एवंम सार्वभौमसत्ताकाे रक्षाका खातिर राज्यलाई सचेत गराउने, झकझकाउने र युवाहरुलाई देश र जनताप्रति उत्तरादायि बन्न प्रेरित गर्ने काम गर्दै आईरहेको छ । यसैकारण यो एक राष्ट्रवादी युवाहरुको समुह हो ।
यसमा कस्ता–कस्ता ब्यक्तिहरुको आवद्धता रहेको छ त ?
पच्चिस प्लस समुह नेपालका २५ जना प्रवुद्ध ब्यक्तित्वहरुद्धारा स्थापित राष्ट्रवादी ब्यक्तित्वहरुको समुह हो । जसमा पूर्व अख्तियार आयुक्त शुर्यनाथ उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ, बरिष्ठ न्युरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटा, पुर्व एआईजि ठाकुर मोहन श्रेष्ठ, राष्ट्रवादी पत्रकार अनिल योगि, वरिष्ठ कलाकारहरु शिशिर योगि र जे पापि र बरिष्ठ सिमाविज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लगायतका नेपालका ख्यातिप्राप्त ब्यक्तिहरु यसमा आवद्ध छन् । त्यस्तै युवा समुहमा पनि त्यस्तै खालका युवाहरुको संलग्नता छ ।
तपाईहरुले संचालन गरिरहनु भएका गतिविधिहरुबारे बताईदिनोस् न ?
खासगरी हाम्रो पच्चिस प्लस समुह र युवा समुह दुवैले गर्ने राष्ट्र, राष्ट्रियता र मुलुक्को सार्वभौमिकताको सवालमा जनतालाई सचेत गराउने काम हो । जनतलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संघियता, गणतन्त्र चाहिन्छ तर यसको प्रयोग सहि रुपमा हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाई हो । हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको देश र जनतलाई विखन्डन गर्ने हेतुले विदेशीको ईशारामा गर्न खोजिएको संघियताको हामी पुर्णरुपमा विरोधी हौँ । यस सन्दर्भमा हामिले आम जनताहरुलाई संघीयता र गणतन्त्रको नाम्मा विकास रोक्ने प्रबृतिका विरुद्ध सचेत गराउँदै आईरहेका छौँ । हामीले आजभोलि खासगरी जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गर्दै आईरहेका छौँ । बिशेषगरी राजधानीका विभिन्न ठाउँमा हाम्रा आम सभा, कोण सभा, छलफल तथा अन्तरक्रियाहरु ब्यापक ढंगबाट दिनप्रतिदिन गर्दै सरकारमा बसेकाहरुलाई ब्युँझाउने काम गर्दै आईरहेका छौँ ।
त्यसो भए तपाईहरुले मुलुकको अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी नियाली रहनु भएको छ ?
पहिलो कुरा आजको मुलुकको घटनाक्रमलाई हेर्दा हामी अत्यन्तै संवेदनशिल अवस्थामा छौँ जस्तो लाग्छ । देशिविदेशी शक्तिहरु जबरजस्त रुपमा नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिक्तामाथि गिद्धेनजर लगाईरहेका छन् । नेपालभित्रैकै अवसरवादीहरु ब्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थलाई विदेशीसंगको सम्बन्धसंग जोडेर आफ्नै देशमाथि आत्मघाति गोल हान्न खोजिरहेका छन् । मधेषी जनताको अधिकारको नाममा नेपालमा जबरजस्त भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याउन खोजिएको देखिन्छ भने जनजाती समुदायको अधिकारको नाम्मा युरोपियन र पश्चिमाहरुलाई नेपाल भित्र्याईदैछ । यसकारण कतै हाम्रो मुलुक हामी आफ्नै कारणले रणभूमी बन्दै त छैन ? यस प्रकार अहिलेको नेपालको राजनैतिक अवस्था असाध्यै दयनीय देखिन्छ । यसको शीघ्र सेफल्याण्डिङ जरुरी छ ।
यति ठुलो समस्या तपाईहरुको जस्तो सानो समुहबाट समाधान गर्न सम्भव छ ?
कुनै पनि महत्वपुर्ण आन्दोलन, एजेण्डा वा बिषयबस्तुको उठान शुरुमा सानै समुहबाट हुने गर्दछ । तपाईले देख्नु भएकै छ नेपालमा प्रजातन्त्र, बहुदल र गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनहरुमा सुरुमा थोरै मान्छे नै थिए । पछि एजेण्डा सहि सावित हुँदै जाँदा मानिसहरुको ठुलो भींड तयार भयो र ठूलाठूला परिवर्तनहरु सम्भव भए । त्यसकारण हाम्रो पच्चिस प्लस समुहलाई पनि सानो भन्न मिल्दैन किनकी हाम्रा एजेण्डाहरु राष्ट्र र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् ।
तपाईहरुको पच्चिस प्लस युवा समुह नयाँ पार्टीको रुपमा उदाउन लागेको हो ?
अवस्य, अहिले हाम्रा गतिविधीहरु शान्तिपूर्ण ढंगबाट सरकारलाई सम्झाउने खालका मात्रै छन् । तर सरकारमा बसेकाहरुले सुन्न चाहेनन् भने हामी जनतामा अवस्य जान्छौँ र आवश्यक पर्दा एउटा पार्टीको समेत निमार्ण गर्न पछि पर्दैनौँ । हामी देशभरीका राष्ट्रवादी र देशप्रेमी प्रबुद्ध ब्यक्तिहरु तथा नव युवाहरुलाई गोलबन्द गर्दै अगाडि बढ्ने छौँ ।